« Raharaha Kidnapping » – 20 taona aty aoriana: maty voatifitry ny zandary i Lama sy ny rahalahiny | NewsMada
Par Taratra sur 14/05/2020
Nanakoako vao maraina ny poa-basy teny Analamahitsy sy teny Ambohimahitsy omaly. Tratran’ny vela-pandriky ny zandary, tsy tafavoaka tao anatin’ny fifampitifirana, Ramandiamanana Norbert, fantatra amin’ny anaram-bositra hoe “Lama” na “Baina” sy ny rahalahiny. Mbola karohina kosa ireo roa lahy namany sy ny teratany karana iray. 20 taona mahery aty aoriana, nifarana hatreto ny tantaran’ity jiolahy raindahiny amin’ny “Raharaha kidnapping” ity…
Vita hatreto ny amin’i Lama! Ny zandary misahana ny heloka bevava (Secres) eny Fiadanana no nifanehatra tamin’ireto jiolahy raindahiny ireto ary nanao vy very ny ainy mihitsy taorian’ny fakana an-keriny an’i Anil Karim. Raha ny tatitra nampitain’ny lehiben’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena (CIRGN) eto amin’ny faritra Analamanga, ny Jly Rakotondrazaka Andry, taorian’ny fakana an-keriny an’i Anil Karim, ny 27 avrily 2020 teo, tsy nitsahatra nifampiresaka amin’ireo jiolahy ny fianakavian’i Anil. « Nohenoinay ny feon’ireo jiolahy dia fantatray tsara fa feon’i Lama. Nanomboka teo ny angom-baovao rehetra momba an’i Lama ary nanao vy very ny ainy mihitsy ny zandary avy ao amin’ny Secres. Miisa 20 ireo olona nosamborina nanaovana fanadihadiana ka ny telo tamin’izy ireo, naterina teny amin’ny fampanoavana (omaly io). Lehilahy roa nalefa eny Tsiafahy raha vehivavy iray kosa nidoboka eny Antanimora”, hoy hatrany ny fanazavan’ny CIRGN. Nandritra ny raharaha kidnapping niseholany teto an-dRenivohitra, voatonona tao hatrany ny anaran’i Lama, raha ny fanazavan’ny zandary. Ny taona 2019, somary nangingina izany kanefa mbola tsy tratra ity jiolahy raindahiny ity, kanjo niverina indray izany tamin’ity taona 2020 ity ary voatonona indray ny anaran’i Lama.
Vola 2 miliara Ar ny azon’i Lama tany amin’ny fianakavian’i Anil…
Nambaran’ity manamboninahitra ity hatrany fa nanao ezaka manokana ny zandarimaria tamin’ny fisamborana azy. Niainga avy amin’ny angom-baovao ny nahafahana nisambotra ny tanan-kavanan’i Lama izay tena natokisany tanteraka amin’ity “kidnapping” farany teo ity. Niainga avy amin’io ny nahafahana nanao ny vela-pandrika rehetra sy nahatratrana an’i Lama teny Analamahitsy, omaly. Efatra andro mialoha no efa niandry teny amin’ny trano iray eny Analamahitsy ireo zandary niaraka amin’ity jiolahy akaiky an’i Lama ity satria nilaza ny handalo eny izy taorian’ny namotsorana an’i Anil Karim. Tonga tao amin’ilay trano tokoa i Lama, omaly tamin’ny 7 ora sy 30 mn maraina, ary nisy ny fifampitifirana ka voatifitry ny zandary teo amin’ny tongony izy. Nandritra ny fanadihadiana azy no nilaza fa vola 2 miliara Ar ny azon’i Lama tany amin’ny fianakavian’i Anil. Namoy ny ainy teny an-dalana ho eny amin’ny hopitaly i Lama noho ratra nahazo azy.
Mbola homena 200 tapitrisa Ar….
Maro ireo anaran’olona notononin’i Lama tafiditra tao anatin’ireny “kidnapping” nalaza hatramin’izay ireny. Isan’izany ny zandary iray manana basy Kalachnikov efatra, niaraka tamina ramatoa iray, raha ny tatitra nampitain’ny zandary hatrany. Teny Manankasina Macolline Ambohimahitsy no nanafenan’izy ireo an’i Anil Karim. Nandeha indray ny zandary, omaly, ka nisy ny fifampitifirana tamina jiolahy iray tao amin’ity trano ity. Nahitana lelavola 80 tapitrisa Ar tao amin’ity trano fanafenan’izy ireo takalon’aina ity. Karohina kosa amin’izao fotoana izao Rajim, i Herman na Man sy ny teratany karana iray mpiray tendro amin’i Lama. Voalaza fa i Dilavarhoussen Raza ny anaran’ilay Karana naman’i Lama ary mialokaloka any Comores ity farany amin’izao fotoana izao. Mbola mipetraka hatrany kosa ny 200 tapitrisa Ar ho an’izay mahita sy manam-baovao momba ireto jiolahy karohina ireto, araka ny nampitain’ny teo anivon’ny zandarimaria.
Nangonin’i Jean Claude sy Fano